आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२६ चैत २०७७ बिहीबार, ८ अप्रिल २०२१) « Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२६ चैत २०७७ बिहीबार, ८ अप्रिल २०२१)
२६ चैत्र २०७७, बिहीबार ००:२५
श्रीशाके १९४२ नेपाल सं. ११४१ श्रीसूर्योत्तरायणे वसन्त ऋतु प्रमादीनामक संवत्सर वि.सं. २०७७ चैत्र २६ गते तद् अनुसार सन् २०२१ अप्रिल ८ तारिख बिहीबार चैत्र कृष्णपक्ष द्वादशी तिथि शतभिषा नक्षत्र शुभ योग कौलव करण आनन्दादिमा बज्र योग चन्द्रमा कुम्भ राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ५ः४९ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १८ः२४ मा हुनेछ । वैष्णवहरूको पापमोचनी एकादशी व्रत, देउपाटनमा देशोद्वारपूजा ।
मेष – दिन शुभ र भाग्योदयकारी सिद्ध होला । आरोग्यता र प्रशन्नता बढ्नेछ । सुखशान्तिमा वृद्धि हुनेछ । आय बढ्नेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त होला । विलासमा पनि आकर्षण बढ्ला । मान पुरस्कार मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । यश वर्चश्व बढ्ला । विजयश्री प्राप्त होला । मिठो भोजन मिल्नेछ । प्रेममा रूचि बढ्ला । भ्रमण पनि गर्नुहुने सम्भावना रहनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । सुख सन्तति धन यश इष्टमित्र बढ्ला । ख्याति फैलिनेछ । सुख शान्ति ऐश्वर्य बढ्ला ।
बृष – दौडधुप बढ्नेछ । शारीरिक र आर्थिक कार्यमा प्रगति होला । विवाद आदिदेखि सचेत भइ अरुको भर नपरेर आफ्नै बल विवेकले काम गर्नुहोला । खर्चमा नियन्त्रण आउनेछ । व्यापारमा सफलता मिल्नेछ । सुख र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा आँट उत्साह बढ्नेछ । साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ ।
मिथुन – व्यस्तता बढ्ला । जोखिममा नपर्नु बेस होला । सोचीविचारी काम गर्नुपर्ला । आशा उत्साह बढ्ला, नयाँ काममा सफलता मिल्नेछ ।
तुला – धनको आगमन भइरहनेछ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । सुख समृद्धि मान पुरस्कार आदिमा विघ्नबाधाको डर रहला । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । अरुसित मिलेर काम गर्नु बेस रहला तर अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुने छैन ।
धनु – धर्मपथमा सफलता मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । मनोकुलको काममा सफलता मिल्नेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्ला । शैक्षिक र बौद्धिक काम बन्नेछ । इष्टमित्रको सहयोग मिल्नेछ । धन मान महत्व बढ्ला । रसराग गीतसंगीतमा आकर्षण बढ्नेछ । सुख सन्ततिसुख बढ्नेछ ।
मकर – खर्च र लगानी बढ्ला । धोखा हुने ठगिने सम्भावना रहनेछ । सोचीविचारी काम गर्नु अनुकुल रहनेछ । हांसविलासमा आकर्षण रहला । नियमकानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ । ऋण रोग र शत्रुप्रति सचेत रहनुहोला ।
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (३ चैत २०७८ शुक्रबार, १६ अप्रिल २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ श्रीसूर्योत्तरायणे वसन्त ऋतु राक्षस नामक संवत्सर
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२ वैशाख २०७८ बिहीबार १५ अप्रिल २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ वसन्त ऋतु वि.सं. २०७८ वैशाख २
कुन राशिको लागि कस्तो छ नयाँ साल ?
‘वि.सं. २०७८’ को राशिफल ■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य मेष – वर्षभरी गुरुग्रह लाभ स्थानमा र राहु दोस्रो
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ राक्षस नामक सम्वत्सर वसन्त ऋतु वि.सं.